September 1, 2020 - Khitalin Media
(၁၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် (အစ/အဆုံး)……
September 1, 2020 by Khitalin Media
၁၉)ကွိမျမွောကျ သိနျးတဈသောငျးခှဲအထူးဆုကွီး / သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး ပ ၃၀၇၆၆၆ သိနျးတဈသောငျးဆု / သိန်းတစ်သောင်းဆု သ ၈၂၈၇၀၉ သိနျးငါးထောငျ / သိန်းငါးထောင် ဋ ၆၅၇၅၅၁ စ ၉၁၁၉၇၃ သိနျးနှဈထောငျ / သိန်းနှစ်ထောင် ဓ ၂၈၄၉၀၆ ဘ ၇၅၀၈၉၃ ပ ၁၀၀၈၈၇ ကဂ ၉၂၆၇၈၉ သိနျးတဈထောငျဆု / သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဟ ၅၀၈၈၈၄ ယ ၆၅၃၄၇၂ ဆ ၄၅၁၅၀၈ ဂ ၇၉၈၁၃၈ ဖ ၄၇၅၇၃၃ ဋ ၆၈၅၈၃၅ ဆယျသိနျးမှသိနျး (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာ အားလုံးအစဥျလိုကျတူမှရမညျ လှဲရငျဘာမှမရပါ / ဆယ်သိန်းမှသိန်း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာ အားလုံးအစဉ်လိုက်တူမှရမည် လွဲရင်ဘာမှမရပါ ဝဝေဆောဆာပဒသော(၃)သိနျးဆု အက်ခရာနဲ့ရှဂေ့ဏနျး(၅)လုံးအစဥျလိုကျတူရမညျ … Read more
ထီတိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန်
ထီတိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန် ပြည်သူအပေါင်း စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ တစ်လမှာ တစ်ခါသာကံစမ်းခွင့်ရကြတဲ့ ထီထွက်ရှိလာပါပြီနော် အားလုံးကံစမ်းထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကို ဒီလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘယ်သူဆွတ်ခွတ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ ကျန်ဆုများကိုလည်း ဘယ်သူတွေကဆွတ်ခူးမလဲ မသိသေးပေမယ့် ခုဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ထီပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အားလုံးကျန်းမာပြီး ထီပေါက်ပြီး လှူနိုင်တန်းနိုင် စားနိုင်သောက်နိုင်ကြပါစေ Credit Unicode ပွညျသူအပေါငျး စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ တဈလမှာ တဈခါသာကံစမျးခှငျ့ရကွတဲ့ ထီထှကျရှိလာပါပွီနျော အားလုံးကံစမျးထားမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီးကို ဒီလို ကိုဗဈကာလမှာ ဘယျသူဆှတျခှတျမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစရာပါပဲ။ ကနျြဆုမြားကိုလညျး ဘယျသူတှကေဆှတျခူးမလဲ မသိသေးပမေယျ့ ခုဒီစာကို ဖတျနတေဲ့ ထီပေါကျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ အားလုံးကနျြးမာပွီး ထီပေါကျပွီး လှူနိုငျတနျးနိုငျ စားနိုငျသောကျနိုငျကွပါစေ Credit
ဆင်းရဲပေမယ့် ကောက်ရတဲ့ ဆွဲကြိုးကို ပိုင်ရှင်ထံ မရမက ပြန်ပေးတဲ့ လင်မယား
ပရိသတ်ကြီးရေ ရိုးသားတဲ့ စိတ်ထားတွေကို ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ…ယနေ့ခေတ်မှာ တန်ဖိုးရှိလို့ပါ…. ယနေ့ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာ ရိုးသားပြီး စိတ်ထားဖြူစင်သူ ဇနီးမောင်နှံ ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ညောင်အုပ္ဖီးအုပ်စု ရိုးရွာကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ကိုစိုးမိုးကျော်+မငြိမ်းငြိမ်း တို့သည် ( ၃-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀)နာရီ အချိန်ခန့်တွင်ကျေးရွာအတွင်း မိန်းလမ်းမပေါ်မှ ရွှေဆွဲကြိုး တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်ရပ်ရွာလူကြီးမှတစ်ဆင့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောဦးညွန့်ဝင်း+ဒေါ်သန်းခိုင်တို့ ထံသို့ မည်သည့်တောင်းဆိုမှုမှမပြုပဲအသိတရားရှိစွာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့် ဆင်းရဲပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ဂုဏ်ပြုကြပါစို့… မူရင်းပို့စ်တင်သူ…Hlamoe Writer ; Kwee (Jeeptoolay) Source ; Ashin Wi Way Ka Unicode ပရိသတျကွီးရေ ရိုးသားတဲ့ စိတျထားတှကေို ဂုဏျပွုပေးကွပါ…ယနခေ့တျေမှာ တနျဖိုးရှိလို့ပါ…. ယနေ့ ဒုတိယဝါဆိုလပွညျ့နမှေ့ာ ရိုးသားပွီး စိတျထားဖွူစငျသူ ဇနီးမောငျနှံ … Read more